Gabadha dharka moodada ah samaysa oo loo doortay xubin katirsan aqalka hoose ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGabadha dharka moodada ah samaysa oo loo doortay xubin katirsan aqalka hoose ee Soomaaliya
November 27, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Gabadha Soomaaliyeed ee dharka moodada ah samaysa ahna ganacsato, Muna Khaliif Shiikh. [Sawirka: Archive]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Gabadha Soomaaliyeed ee dharka moodada ah samaysa ahna ganacsato, Muna Khaliif Shiikh oo loo yaqaan (Muna Kay) ayaa loo doortay xildhibaan aqalka hoose ee soo socda u matali doonta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed.
Muna Kay, ayaa ku dhalatay Soomaaliya, waalidkeed ayaa ka cararay dalka Soomaaliya markii uu bilaabmay dagaalkii sokeeye iyaga oo aaday dalka Mareykanka. Muna ayaa dalka ay u qaxday ee Mareykanka ka samaysay shirkad dharka moodada ah samaysay, taasoo xarumo ka furatay Mareykanka, Imaaraatka Carabta iyo Bariga Afrika.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay ayaa maanta oo Khamiis ah ku qarxay meel u dhow huteel iyo makhaayad kuyaala Muqdisho, waxaana ku dhintay ugu yaraan 15 qof, sida ay ku warantay wakaalada [...]